'सरकारी डाक्टरले अपराध गरे': डा. सुन्दरमणी दिक्षित – Kalika News
‘सरकारी डाक्टरले अपराध गरे’: डा. सुन्दरमणी दिक्षित
"सरकारी नुन खाएपछि खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ "
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार १०:५२ , मा प्रकाशीत
कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक अहिले आन्दोलनमा छन । चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण बिरामीहरुको बिचल्ली भएको छ । तर संवादहिनताका कारण समस्या ज्यूँका त्युँ छ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामिले बरिष्ठ चिकित्सक एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षितसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ डा. दिक्षितसंग कालिकान्युजकर्मी राजु सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानी :
सवाल : अहिले सरकारी चिकित्सकले जारी राखेको आन्दोलनमा तपाइँको प्रतिकृया के छ ?
जवाफ : डाक्टरहरुले एउटा पनि बिरामीमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन, हुँदैन । हामि डाक्टरको धर्म भनेको कुनै पनि बिरामीलाई हानि–नोक्सानी नपुर्‍याउनु हो । डाक्टर भएर बिरामी नहेर्ने हस्पिटल ठप्प पार्ने यो भन्दा ठूलो अन्याय त मानवअधिकारमा अर्को केहि हुनै सक्दैन हेर्नुस । यो चैने अति अन्यायको कुरा हो । डक्टरी सेवा कि यिनीहरुले गर्ने हुदैनथ्यो, उनिहरुको यो मनस्थिती हो भनेदेखि उनिहरुले अर्को पेशा गरेको भए हुन्थ्यो ।
सवाल : डाक्टर दिक्षित तपाई वरिष्ट चिकित्सक हो । सबै जना चिकित्सकहरुले एक हिसाबले मान्नु पनि हुन्छ । वरिष्ठ चिकित्सक भएर हाम्रै मागको विपक्षमा बोलिदियो भनेर सरकारी चिकित्सकहरुको तपाइँप्रति चित्त दुखाई रहला नि फेरी ?
जवाफ : चित्त दुखाएर काम छैन । उहाँहरुले आफ्नो धर्म सहि तरिकाले मान्नु पर्‍यो । उहाँहरु आफ्नो पेशाको धर्मको मान मान्यता सम्झेर काममा फर्किनुपर्‍यो । बिरामी हेर्नुपर्‍यो । नत्र भने यो चल्दैन । फेरि हेर्नुस न गरिब गुरुवा छन यहाँ । सबै जना प्राइभेट हस्पिटल जान सक्दैनन । मैले देखेछु दृष्य टिभिमा देखेछु,पत्रपत्रिकामा देखेछु मैले , फोटो देखेछु मैले । बिरामीको पिडा महसुस गर्नुपर्‍यो डाक्टरहरुले ।
सवालः क्रियापछि प्रतिक्रिया आउँछ भनेर चिकित्सकहरुले अपेक्ष गर्नु भएको थियो होला संभवत, तर त्यो प्रतिक्रिया सरकारले गतिलो गरि दिएन नि फेरि ?
जवाफ : यसमा सरकारको र अरुको कुरै नगरौँ न डाक्टरको धर्मको कुरा गर्दैछु । एउटा ब्यक्ति डाक्टरी पेशामा आएको छ भने उसको धर्म भनेको बिरामीप्रति कम्प्लिटली बफादार हुनुपर्छ । त्यो डाक्टरले आँफुलाई अति अप्ठयारो परेपनि बिरामीको औषधि गर्नैपर्छ । मानौ कुनै संक्रमण आयो रे, इबोला भाइरस आयो रे । अव त्यो बेला डाक्टरले म त्यो औषधि गर्दिन भनेर भाग्न पाउदैन नि । उसले त आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर पनि उपचार गर्नुपर्छ । अहिले त यहाँ सरुवाको कुरा मात्र छ बाबै ठुलो कुरा पनि होइन । सरुवा फेडरल गर्भनमेन्टले गर्ने कि उसको अण्डरमा अरुले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो त । डाक्टरले यसरी देश व्यापीरुपमा एक–एक नेपालीलाई कष्ट दिएर यो गर्नु त अपराध नै हो । अझ एक प्रकारले भन्ने हो भने कुनै मान्छे यसको कारणबाट मरेको छ भने त्योत मर्डर नै हुन्छ हेर्नु ।
सवाल : यो अपराध हो भनेर तपाईले, हामीले अथवा जनस्तरबाट भनेर भएन नि । यदि अपराध हो भने सरकारले एक्शन लिनुपर्ने होइन ?
जवाफ :: सरकारले एक्शन लिन सक्नु पर्छ किनभने यसमा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सरकारले एक्शन पनि लिनु पर्छ र साथ साथमा उनीहरुलाई टेबलमा पनि आवहान गर्नुपर्छ । तर त्यो टेबलमा आवहान गर्दा उनीहरुले आफ्नो यो बन्द हड्ताल इमिडेट्ली तुरुन्तै स्थगन गर्नु पर्छ । नत्र भने यो त सुप्रिम कोटबाट आदेश हुन्छ । सरकारले पनि भनिसकेको छ । अति आवश्यक सेवाहरु ठथप्प पार्न पाइदैन भनेर । बुद्धि नपुर्‍याए यिनीहरुलाई चार्ज लाग्न सक्छ । हेर्दै जानुस ।
सवाल : डाक्टर दिक्षित गोजीमा राजिनामा बोकेर हिँडेका सरकारी चिकित्सकहरु सरकारको कारवाहीसंग डराउलान र ?
जवाफ : सरकारी डाक्टर जो छन् यिनीहरु अव होसमा आउन । आफ्नो दायित्व निभाउन पहिलो कुरा, सरकारले के गर्छ भन्ने दोश्रो कुरा हो । पहिले आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ । बिरामीलाई यसरी मैले अन्याय गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर पहिला आफूलाई सोधुन । कुरो पक्का छ अन्याय नगर्न भन्छ आत्माले । बरु तुरुन्तै सरकारसँग डायलगमा जान सकिन्छ । सरकारसँग त बिस्तारै कुरा गर्न सकिन्छ । तर एउटा मामुली सरुवाको विषयलाई लिएर, कसले हामीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा लिएर यत्रो हङ्गामा मचाउनु चाहि अति नै गलत कुरा हो । यिनीहरु माथि ठुलै अपराधिक मुद्दा चलाए पनि हुन्छ मेरो विचारमा ।
सवाल : गोदानका पदाधिकारीसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ । अन्याय गर्नु एक ठाउँमा छ, तर अन्याय सहेर बस्नु भनेको त्यो ठुलो अन्याय हो, त्यो अपराध हो । त्यसकारणले गर्दा हामीले यसपटक अन्याय नसहेको हो भन्ने प्रतिक्रिया आयो । के छ तपाइको धारणा यसमा ?
जवाफ : कुनै पनि सरकारले उनीहरुलाई तिमीहरु फलानो ठाउँमा गएर काम गर भन्यो भने उनीहरु जानैपर्छ, कुनै उपाय नै छैन । किनभने उनिहरु सरकारी तलब खाएका व्यक्ति हुन । आफू खुसी काम गरेका बेतलबी, निजी मान्छे होइनन । सरकारी तलब खाएर बसेका डाक्टर हुन् । यिनीहरुको बढुवा र सरुवा दुबै गर्न सक्छ सकरकारले । यो आज मात्र होइन, यो पञ्चायत कालमा पनि थियो । म पनि भुक्तभोगि हुँ । कहिलेकाहिँ समस्या हुन सक्छ । मैले देखेको छु कति ठाउँमा अन्याय नै गरेर सरुवा पनि भएको छ । तर कुनै उपाय छैन सकारी नुनपानी खाएपछि उनिहरुले खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ । अर्को कुनै उपाय छैन ।